FSX - Fiara sy sambo
Fampidinana: 7,072 alaina 966,888 fotoana.
Ady fitaterana an'habakabaka FSX USS South Carolina BB-26. Ity sambo mpiady efa tsy nampoizina ity no sambo mpitarika ny kilasy South Carolina. Notendrena tamin'ny 1910 izy ary nanao fisafoana ny ankamaroan'ny tany Karaiba sy Atlantika ary nilalao ny anjara asany tamin'ny WW1 tany Kuba sy Panama. Nasiana basy 8 x 12 inch sy basy 22 x 3 inch izy. Nanjary nesorina ny sambo tamin'ny 1921 ary nofoanana tamin'ny 1924. Azonao atao izao ny mizaha ity sambo mpiady Ady Lehibe I ity tamin'ny alàlan'ny fakan-tsary miisa fito amby roapolo mampiseho antsipirihany an-jatony ao anatin'izany ny tetezana virtoaly. Ny effets dia namboarina manokana ho an'ny seranan-tsambo sy ny starboard. Ny sambo AI dia navadika avy amin'ny Sketchup ho FSX teratany avy amin'i Klaus Novak ary an'ny tafiky ny tafika an-dranomasina amerikanina WWII tao SOH. Fanamboarana sy fisie ho an'ny sambo azo alain-tahaka nataon'i Erwin Welker.
Noforonina Alakamisy, 25 Febroary 2021 03: 21
Anaran'ny fisie ww1battleship_southcarolina.zip